Warshadda Nadiifiyaha Shaashadda Taleefanka Shiinaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Taleefannada qof walba wuu joogteeyaa duugista iyo jeexitaanka maalin kasta, taabashada joogtada ahi waxay ku sumoobi doontaa taleefanka gacanta, oo u-samayska wasakhdu wuxuu u baahan yahay in la nadiifiyo marba mar. Iyo sida loo nadiifiyo Smartphone -kaaga waxaad la yaabi kartaa? Adigoo adeegsanaya tirtirayaasha shaashadeena iyo nadiifiyaha shaashadda dhejiska leh ayaa xallin kara…
Taleefannada qof walba wuu joogteeyaa duugista iyo jeexitaanka maalin kasta, taabashada joogtada ahi waxay ku sumoobi doontaa taleefanka gacanta, oo u-samayska wasakhdu wuxuu u baahan yahay in la nadiifiyo marba mar. Iyo sida loo nadiifiyo Smartphone -kaaga waxaad la yaabi kartaa? Isticmaalka tirtiryaasheena shaashadda iyo nadiifiyaha shaashadda dhejisan ayaa xallin kara dhibaatadan.
Nadiifiyaha Shaashadda dheggan waxaa laga sameeyey maro microfiber aad u fiican, si sahal ah uga saari kara saliidda, wasakhda iyo faraha faraha shaashadaha si ammaan ah. Waa la dhaqi karaa oo dib loo isticmaali karaa marar badan. Waxaan sidoo kale leenahay noocyo kale oo masaxa shaashadda waxaa laga sameeyay PVC jilicsan iyo maqaar PU oo gadaal leh oo lagu daboolay microfiber sida nadiifiyaha. Kaliya maahan inuu nadiifin karo taleefanka mar walba, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sidii qalab -dheere.
Waxaa loo adeegsaday nadiifinta shaashadda, istaagga taleefanka gacanta iyo soo jiidashada taleefanka gacanta
Astaanta caadadu samaysay sublimation, daabacan, xardhan iyo midab buuxiyey.
La dhaqi karo, raagaya oo dib loo isticmaali karo
Lifaaq: Xarigga guurguura, Xadhigga Gu'ga, Xarigga Dabacsan, Silsiladda Kubadda, Keychain, iwm.
Qaabab gaar ah, cabbirro, midabyo iyo naqshado waa la soo dhaweynayaa.
Hore: Suunka Telefoonka
Xiga: Soojiidashada Taleefanka